Wararka ku saabsan Delta Engineering: dhacdooyinka, carwooyinka, joornaalada
Had iyo jeer waxaa jira wax cusub oo khibrad looga helayo Delta Engineering. Haddii ay tahay horumar cusub ama casriyeyn lagu sameeyay mashiinnada jira iyadoo lala shaqeynayo macaamiisheenna.
Ma rabtaa inaad lasocoto? Xulo mid ka mid mowduucyada hoose si aad u hesho macluumaad faahfaahsan:
Injineerka Delta ee warbaahinta
Event Ku biir Delta Engineering goobta ASB Open House in Atlanta, GA
taariikhaha 24-25-26 Meey 2022
Waa maxay? Inta lagu jiro Guriga Furan ee ASB, mishiinnada Delta Engineering waxay shaqayn doonaan oo ay si buuxda ula midoobi doonaan mishiinnada wax-qaabaynta ASB oo ay la socdaan qalabka caawimada. Fiiri ajandaha iyo mashiinada kala duwan ee ku jira shaqada dukumeenti ku lifaaqan.
Ajendaha waa isku mid maalin kasta oo qayb ka mid ah diiwaangelinta waxaad awoodi doontaa inaad muujiso maalinta aad door bidayso, taas oo la xaqiijin doono ka dib iyadoo ku xiran helitaanka.
Xiiseynaya? Is diwaangeli halkan sida ugu dhaqsaha badan, maadaama tirada boosaska maalintii ay xaddidan tahay.
Location Xarunta Taageerada Farsamada ASB ee Atlanta, GA
1375 Highlands Ridge RD SE
QIIMAHA CASRIMADA BASKA EE PLASMA
Soo dejiso sawirka saxaafadda
Daboolista DELTA Plasma
Daawada Plasma, oo muddo dheer loo isticmaali jiray in lagu daaweeyo sagxadaha dhalooyinka sharaabka, kaliya looguma talagalin shirkadaha cabitaannada fudud. Habka, oo loo isticmaali karo in lagu hagaajiyo caqabadda gaaska ee dhalooyinka PET, ayaa sidoo kale bixiya faa'iidooyin marka ay timaado soo saarista alaabada HDPE iyo weelasha waaweyn.
Plasma waa mid ka mid ah afarta gobol ee walxaha, oo ay weheliso adag, dareere iyo gaas. Delta Engineering mashiinada dahaadhka cusub waxay hormariyaan dhigista uumiga uumi-baxa ee kiimikada (PECVD).
Faa'iidooyinka Daawada Plasma
Dahaarka Plasma waa baddal macquul ah oo loogu talagalay tiknoolajiyadaha badan, oo bixiya faa'iidooyin kala duwan. Marka la barbardhigo tikniyoolajiyadda isku-dhafka badan, waa mid wax-ku-ool ah oo waliba waari karta dhinaca deegaanka
Teknolojiyadaha daaqsintu waxay ka dhigayaan dib u warshadeynta mid wax ku ool ah oo wax ku ool ah, waana tallaabo muhiim u ah dhaqaalaha wareega
Riix halkan si aad u aqriso maqaalka.
UDK450 GUDDOOMIYAHA KU SAARAN 1 MACAAN 2LO MACHINE
Isku-darka Delta Injineerinka UDK 450 nidaamka soo-bixinta aaladda mashiinka dhexdiisa. Nidaamka ikhtiyaariga ah wuxuu adeegsadaa farshaxanka casriga ah, nidaamka korantada sare si dhaqso leh oo si toos ah loo ogaado loona diido weelasha leh microcracks.
Qiimaha iyo keydinta booska. Ku darista nidaamka wax soo dejinta ee gudaha makiinadda mashiinku waxay badbaadineysaa meel bannaan waxayna ka qaalisan tahay iibsashada nidaamka si gooni gooni ah.
DELTA DIIWAANKA SPRAY COATING UNIT
U soo dejiso war-saxaafadeedka sida loo yaqaan PDF-document
Koofiyadaha cusub ee buufinnada ee loo yaqaan 'Delta Engineering' ayaa lagu dabaqayaa khafiifinta khafiifka ah ee dhalada si wax looga qabto arrimo dhowr ah oo had iyo jeer saameeya dhalooyinka PET ee khadadka buuxinta. Dhalooyinku waxay ku soo ridaan weelka wax lagu qaado, ka dib ayaa qoorta lagu xukumaa waxaana lagu qaldayaa dahaarka ka hortagga astaamaha ka hor inta aan dhaladaha qallalan lagu soo celin garsooraha si ay uga baxaan mashiinka qiyaastii ah 8,000 dhalo saacaddii.
Mashiinka, oo samaynaya kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Woqooyiga Ameerika ee NPE2018.
Tayada wax soo saarka ee la wanaajiyey iyo hawlgallada wax soosaarka ee fudud Dhalooyinka dhaqaaluhu ku daweeyo waxay u badan tahay inay ku xirnaadaan inta u dhexeysa hagida, leeyihiin nal soo hagaagsan, calaamado shay oo yareeya oo aan badneyn. Isticmaalayaashu si dhakhso ah oo fudud ayey u sameyn karaan isku-hagaajin si ay u degaan noocyo kala duwan oo dhalooyin ah. Sidoo kale, hannaanka buufinta cusub ee mashiinku waa mid hufan, yareynta isticmaalka daaha.
Injineerkeena Iibka Danny Stevens sidoo kale waa afhayeenka martida: Dahaarka Plasma - daraasad kiis macmiil
(Talaado 12 Oktoobar markay tahay 4.30:XNUMX galabnimo)
taariikhaha 11th - 13th October 2021
Booska bandhiga Booth #49
Location Wareegga Crowne Plaza Atlanta ee Ravinia | Atlanta, GA - Mareykanka
website rasmiga ah https://www.blowmoldingdivision.org/abc-2021-overview
Qunsulka Guud ee Belgium ee Atlanta ayaa booqday Delta Engineering Inc
Soocelinta dhacdada Delta Injineerinka ee NPE
taariikhaha 7 - 11th 2018 karaa
Booska bandhiga S18058
Cinwaanka Orlando, Florida ee dalka Mareykanka
Wefdiga Beljamka ee xafiisyadeenna ka yimid Atlanta